Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Ijikọta njem na ịrụ ọrụ n'ime ime bụ ihe na -eto eto
Njem njem • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
TUI na -atụgharị n'ahịa ndị ọzọ dị ka omume na -eto eto maka njem ejikọtara yana ahụmịhe ọrụ ebe dị anya ka ọ na -ewepụta ngwugwu 'ọrụ' ọhụrụ.
N'ihi COVID-19 ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ na-arụ ọrụ site n'ụlọ bụ ugbu a ụkpụrụ maka ọtụtụ.
Ọrụ nwere ike na -ewu ewu ka a na -ewepụtakwu mgbanwe ọrụ ka mba na -alaghachi n'ọfịs.
Ntinye TUI n'isi ahịa ahịa nwere ike hụ na ọ ghọrọ onye isi ahịa n'oge.
Site n'ịchọ njem njem a na -atụ anya ịlaghachi nwayọ, TUI na -atụgharị n'ahịa ndị ọzọ dị ka omume na -eto eto maka njikọta njem na ahụmịhe na -arụ ọrụ n'ime ime ka ọ na -ewepụta ngwugwu 'ọrụ' ọhụrụ iji wee bụrụ onye na -eweta ọrụ ọhụrụ nke njem njem a.
N'ihi ọrịa na -efe efe si n'ụlọ na -arụ ọrụ ugbu a maka ọtụtụ ndị na -arụ ọrụ nwere ike ịbawanye ewu ewu ka a na -ewebata mgbanwe ọrụ ka mba na -alaghachi n'ọfịs.
Tui achọpụtala usoro a na-eto eto n'oge wee mepụta ngwugwu ha na ihe ndị dị mkpa na-arụ ọrụ n'ime anya gụnyere Wi-Fi na ebe ọrụ raara onwe ya nye na 30 nke ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ zuru ụwa ọnụ ya. Ịrụ ọrụ n'ime ime nwere ike bụrụ ihe ndabere nye ọtụtụ, na ntinye TUI na mbụ n'ahịa ọrụ nwere ike hụ ka ọ bụrụ onye isi ahịa ahịa n'oge.
Ntuli aka emere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara oke mmasị maka nleta ole na ole n'ọfịs post-COVID-19 na 29% nke ndị na-aza ajụjụ zuru ụwa ọnụ na-achọ ileta ọfịs kwa ọnwa, nkeji iri na ise, ma ọ bụ mgbe njikwa rịọrọ. Otu onye ọzọ n'ime ise (21%) agaghị achọ ileta ọfịs ọzọ.
Mgbanwe nke ndị na -arụ ọrụ n'ime obodo na mmasị ndị mmadụ ịga leta ụlọ ọrụ anaghị egosipụtakarị ohere ahịa dị mma maka TuiIhe ngwugwu ọrụ. Ọrịa COVID-19 na-amanye ịrụ ọrụ n'ime ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'ọfịs, ngbanwe mmetụta ha na-egosipụta ọchịchọ idobe nhazi ugbu a. Ọtụtụ ga -achọsi ike ịpụ, na mgbanwe ihu ala nwere ike inye nkwalite nrụpụta.
Ntuli aka dị n'ihu chọpụtara na 45% nke ndị nabatara kwuru na ohere ka mma ilekwasị anya bụ ihe kpatara ijigide ọrụ n'ime ime obodo. Ịgbanahụ ịrụ ọrụ ga-eweta ahụmịhe ọrụ ọhụrụ dịpụrụ adịpụ pụọ na ndọpụ uche nke ụlọ yana yana nri niile gụnyere, ndị ọrụ nwere ike lekwasị anya na ọrụ na-enweghị ibu ọrụ nke ọrụ kwa ụbọchị.
Tui bụ onye na -ahụ maka njem nlegharị anya nke mbụ nyere ngwugwu akọwapụtara maka ndị ọrụ nọ n'ime ime. Agbanyeghị na ụfọdụ ụlọ oriri na nkwari akụ enyela ngwugwu yiri ya Tui, ọtụtụ n'ime ha nyere naanị otu ụbọchị ka ha jiri otu ime ụlọ. Onye na -ahụ maka njem na -ejikọ ihe ndị dị mkpa na -arụ ọrụ n'ime ime yana ịnọ ezumike na họtel ya.
N'ịchọ njem njem a na -atụ anya na ọ ga -ewe oge ịlaghachi azụ, na -elekwasị anya na -arịwanye elu maka ọrụ ime ime site na ịnye ngwugwu ọrụ nwere ike kwụọ ụgwọ maka ya. Tui ma kwado nloghachi ngwa ngwa na ọkwa ego COVID tupu onye na-eme njem.